Abu Anas Al-libi oo ku dhintay Mareykanka (Muxuu u dhintay?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Mareykanka, waxaa isbitaal ku yaalla Magaalada New York ku geeriyooday Abu Anas Al-libi ahaa sarkaal ka tirsan Alqaacidda oo Mareykanka dalka Liibiya ka qafaasheen sanadkii 2013.
Qareenada Abu Anas ayaa sheegay inuu dhintay ka hor inta aan la horgeyn maxkamad la saari lahaa. Al-libi ayaa Mareykanka u heystay inuu ku lug lahaa weeraro qarxin oo sanadki 1998 lagu qaaday safaaradaha uu ku leeyahay Kenya iyo Tanzania.
Wararka ayaa sheegay in Abu Anas oo magaciisa runta ah ahaa Naziha C/xamiid Al-ruqeyci, islamarkaana 50 jir ahaa uu u geeriyooday Kansarka beerka ku dhaca.
Xarakaatka Jihaadiga ee Aduunka ayaa rumeysan inu Abuu Anas Al-liibi uu u dhintay jirdil daran oo ay u geysteen laamaha sirdoonka Mareykanka.
Abu Anas Al-libi ayaa Mareykanku raadinayey muddo 10 sano ah, waxaan madaxiisa la saaray lacag dhan 5 Milayn dollar.